Madaxweynaha Puntland oo sheegay in aan qofna lagu jirdilin gudaha xabsiyada Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo sheegay in aan qofna lagu jirdilin gudaha xabsiyada Puntland
Boosaaso-(Puntland Mirror) Isaga oo la hadlayay idaacada VOA qaybta Af-Soomaaliga Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa qaadacay eedaymo sheegaya in Puntland ay jirdil u geysato maxaabiista ku jira xabsiyada.
“Taasi waligeed ma dhicin, mana ahan sax, mana ogolaanayno wax walba oo tacadi iyo jirdil ah, ciidamadayadu waa u tabobaranyihiin,” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa sheegay in kiisaska argagixisada ay baaraan ciidamo loo tabobaray.
“Qof walba ma baaro kiisaska argagixisada sida Al-Shabaab, waxaa jira ciidamo gaar ah kuwaasoo loo tabobaray in ay baaraan kiisaskaas.” Ayuu yiri Madaxweyne Cabdiweli.
Ugu dambayna, Madaxweynaha ayaa sheegay in uusan doonayn in qof aan lahayn wax dambi loo yeelo dambi.
Hadalka Madaxweynaha ayaa imaanaya asbuuc kadib markii qayb kamid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Boosaaso ay dowladda ku eedeeyeen in ay jirdisho maxaabiista ku jira xabsiga Boosaaso si ay u qirtaan dambiyadooda.